ပထမဆုံးပရိုဂရမ္မာဂိမ္းေတြဟာကြန္ပ်ဴတာေတြမွာအရာတစ္ခုျဖစ္လာတဲ့အခါအခ်ိဳ႕ေသာအေျခခံအက္ပလီေကးရွင္းေတြနဲ႔ စာသားအေျခခံတဲ့ဂိမ္းေတြျဖစ္လာပါတယ္။ အမှုအရာတွေဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာတာကတော့အများကြီးကတည်းက၊ထို့နောက်အခုကျွန်တော်တို့မှာရှိကြနှင့်အတူရှုပ်ထွေးပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့အလိုတူသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂရပ်ဖစ်နှင့်အလှန် NPCs လိုဧရာမခိုးမှု။ ဒါကြောင့်,သင်ရုံအခမဲ့စာသားကိုအခြေခံပြီးလိင်ဂိမ်းများကိုခေါ်မယ့်ဆိုက်စတင်ခဲ့ကြောင်းကြားရသောအခါသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းအသံစေခြင်းငှါ,,အထူးသဖြင့်ဒီအချိန်အတွက်ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးအကြောင်းအရာ၌အသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင့်ဂိမ်းကျော်အံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်တိုးမြှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူကြွလာ., သို့သော်ဤဂိမ်းများသည်ပုံမှန်စာသားအခြေပြုဂိမ်းများမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအဟောင်းပုံစံ၏အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကလိင်ဆိုင်ရာဂိမ်းများမှလိင်ဂိမ်းများ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်စာသားအခြေပြုဂိမ်းများ၏ဇာတ်ကြောင်းဆိုင်ရာအားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤသည်ကစားသမားပိုကောင်းဇာတ်လမ်းထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဗတ္တိဇံနှင့်အဓိကဇာတ်ကောင်နှင့်အတူခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီပေးသည်။ သငျသညျအတှငျးမှဇာတ်လမ်းကိုရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်သောသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်ကူးယဉ်အခြေအနေယခုပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျဖြစ်လိမ့်မည်။ တဖန်သင်တို့နေဆဲပုံမှန်အစည်းအဝေးဂိမ်းကနေအပြန်အလှန်လိင်မြင်ကွင်းများရ
ကျနော်တို့ကဒီဆိုက်ပေါ်မှာဖန်တီးသောပလက်ဖောင်းသင်တစ်ဦးပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူလာမယ့်ကြောင့်တားမြစ်ခြင်းမရှိသောအခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့မလိုအပ်ပါဘူး,သင်ဘာမှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးနှင့်အရာခပ်သိမ်းအွန်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းကိုသင်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ဆိုလိုတာကအသစ်ကရီ၅မျိုးဆက်မှဖြစ်ကြသည်။ စတင်ကြည့်ရှုခြင်း၊ဂိမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့အတွင်းမှတောရိုင်းပုံပြင်များကိုခံစားပါ။
ဒါကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်မှကြွလာသောအခါ,သူတို့ထဲကတချို့ကအမြင်အာရုံနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ သင်၏မျက်လုံးများကိုစိတ် ၀ င်စားစေရန်၊ဘတ်စကတ်ဘော၊ပီကေဝါးခြင်း၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ခြေကစားခြင်းစသည်တို့အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သာသင့်ရဲ့စိတ်ကိုအားဖြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရနိုင်ကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်အခြေအနေများအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်မျိုးမှာမပျောက်ပျက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းများ၏အယူအဆကိုရှင်းပြဖို့အသုံးပြုကြပါစို့။ မဖွယ်မရာစာသားအခြေပြုဂိမ်းများတွင်သင်သည်အဓိကဇာတ်ကောင်၏ရှုထောင့်မှကစားလိမ့်မည်။ ရဲ့သင်ကောင်လေးအဖြစ်ကစားဆိုပါစို့။ ကောင်းပြီ,သင်ဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ကောင်များအကြားအားလုံးအပြန်အလှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖတ်ရလိမ့်မယ်။, သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်သူ၏အမဘဝတွေကိုခှဲခွားသူယောက်ျားလေးပုံပြင်၏စာသားကနေတဆင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်စိတ်ကူး၌ပြစ်မှားမိသွားရာမှတဆင့်အားလုံးစိတ်ခံစားမှုရလိမ့်မည်။ ထိုပုံပြင်များဒါကောင်းစွာကျမ်းစာ၌လာသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ. အီမိုဂျီစာပေမှတပါး,ဤဂိမ်းလည်းဂရပ်ဖစ်အားဖြင့်သင်တို့၏မျက်စိနှစ်သက်တော်မူ၏။ သင့္ရဲ႕ေခါင္းထဲမွာသူတို႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြကိုျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေတာ့လိင္တံထိပ္ကိုေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ လိင္တံထိပ္ကေနလိင္တံထိပ္ကိုလိင္တံထိပ္ကိုေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ လိင္တံထိပ္ကိုေရာက္ၿပီလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။
မဖွယ်မရာမှတပါးငါတို့သည်သင်တို့ဤစုဆောင်းမှုအတွက်ကိုချစ်သွားကြသည်ဤမျှလောက်များစွာသောအမာခံမျိုးနှင့်အတူလာကြ၏။ ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမတွေ၊ရုံးစွန့်စားခန်းတွေ၊လိမ်လည်လှည့်ဖြားတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေ(သို့)စီအီးအိုတွေအကြောင်းပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်လည်းသင်မိကျောင်းနှင့်အခြားဆွဲဆောင်သတ္တဝါများနှင့်ဂြိုလ်သားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်ကြောင်းဇာတ်ကောင်နှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ကင်းကမ္ဘာထဲမှာစွန့်စားပျော်မွေ့နိုင်သည့်အတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောညစ်ညမ်းဂိမ်းနှင့်အတူလာကြ၏။ ကျနော်တို့တောင်မှသင်အတင်းအဓမ္မလိင်စိတ်ကူးယဉ်များ၏အပူဆုံးအချိန်လေးအချို့အသက်ရှင်နိုင်သည့်အတွက်မုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍကစားဂိမ်းရှိသည်။
ဤဂိမ်းအများစုသည်စာဖတ်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည့်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မျက်လုံးများကိုမတိကျ၊အရောင်အစီအစဉ်ဖြင့်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စုဆောင်းမှုစည်းရုံး,သငျသညျကအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုသိနိုငျသောအနေဖြင့်ဂိမ်းများအတွက်စကားစုများနှင့်ဖော်ပြချက်အများကြီးနှင့်အတူ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ဂူးဂဲလ်များအားလုံးကိုသင်၏ဘရောက်ဇာတွင်တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ပလက်ဖောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နှင့်သင်တိုးချဲ့မဆိုကြင်နာမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာအင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်ဖြစ်သည်။